Baahin: Isniin, Feb 27, Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. 2 qarax oo ay ku dhinteen 2 qof, 7-na ku dhaawacmeen oo ka dhacay xaafada Wardhiiglay, Muqdisho; 4 ka mid ah burcad badeed afduub u haysata markab u raran ganacsato Somali ah oo lagu qabtay Hobyo; Ahlu-sunna oo sheegay in ay dileen sarkaal sare oo ka tirsan Al-shabaab. – Radio Daljir
Febraayo 27, 2012 12:00 b 0
Dawladda federaalka oo cambaaraysay qaraxyadii shalay lala bartilmaameedsaday dad shacab ah
Baahin: Axad, Feb 26, C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Buurtinle. M/weyne Shariif oo sheegay in horumar siyaasadeed laga dhaxlay shirkii London; Puntland & dawlada federaalka oo sheegay in ku biirida kooxda Atam ee Al-shabaab aanay micne weyn samaynayn; Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ka xog warramay hawlgallada nabadeed ee ka socda ee Gedo, Bay & Bakool .